Mari yeMangoda ekwaMarange yoBhadhariswa Vashandi veHurumende
Chikunguru 19, 2011
Bazi rezvemigodhi nezviwanikwa rakapa bazi rezvemari mari inosvika $27 million yakawanikwa kubva mukutengeswa kwemagoda, iyo yakashandiswa mukuwedzera vashandi vehurumende mari dzemihoro kubva mwedzi uno.
Gurukota rezvemari VaTendai Biti vabvuma kuti gurukota rezvemigodhi nezviwanikwa VaObert Mpofu vakazobvuma kupa mari yakabva mukutengeswa kwemangoda ekwaMarange kubazi ravo kuti ibhadhariswe vashandi vehurumende.
Asi VaBiti vayambira kuti tsime remari yemangoda iri rakapwa, bazi ravo rino sara risina rimwe danho rekutora kunze kwekudzosera vashandi kumari dzavaipiwa kare.
Nyaya yekuti mari yemangoda ndiyo yashandiswa kubhadhara vashandi yatendwa naVaMpofu muhurukuro yavaita neStudio 7.
Vashandi vehurumende vatambira mihoro yavo vati vawana mari dzavo dzawedzerwa, sechivimbiso chakaitwa nehurumende kutanga kwemwedzi uno.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende, reApex Council, rakazivisa mushure memusangano waro nevamiriri vehurumende kuti mushandi wepasi aizowedzerwa nemari inoita madhora makumi matatu nerimwe pamwedzi.
Munyori mukuru wePTUZ, VaRaymond Majongwe vati sangano ravo rino tambira zvaro mari idzi asi nhengo dzaro hadzisi kufara sezvo mari yawedzerwa iyi iri shoma zvikuru.
Hurukuro naVaObert Mpofu